Madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo Muqdisho dib ugu soo laabtay – Damqo
Madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho kadib muddo bilooyin ah oo uu dalka dibadiisa ku maqnaa.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaaalka soomaaliya Mas’uuliyiin ka tirsan madasha Xisbiyada Qaran saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International airport .
Shariif Sheekh Axmed ayaa kasoo amba baxay magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya oo uu maalmihii dambe ku sugnaa , waxaana inta uu Nairobi joogay kulan Gaar ah oo saacado qaatay la yeeshay ra’iisul wasaarihii hore ee soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale Shariif Sheekh Axmed ayaa mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta kula kulmay magaalada Abuu Dubai kuwaas oo uu kala xaajooday xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidii ay u taageerilahaayeen ololihiisa musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa inuu u safro magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle oo ay ka socoto qaban qaabada doorashada hogaanka sar sare ee Maamulkaas maadaama xalay lasoo saaray liiska xildhibaaanada baarlamaanka 2aad ee Hirshabeelle.
Previous Banaanbax ka dhan ah Faransiiska oo Muqdisho ka socda
Next Wararkii ugu dambeeyay Koox hubeysan oo dad shacab ah ku dilay Caabudwaaq